Taorian'i Thijs H., ny volavolan-dalan'i Edith Schipper ho fitazonana ny fitazonana, izay nolavina tao amin'ny kabinetra teo aloha, dia hosamborin'ny rehetra: Martin Vrijland
Mbola tsy vonona ny vahoaka. ny fanangonan-tsonia avy amin'ity tranonkala ity dia nandresy sonia maherin'ny 5.000 tamin'ny volavolan-dalan'i Edith Schippers nandritra ny kabinetra Rutte teo aloha. Raha fintinina, dia midika be izany tolo-dalàna izany fa ny namanao, ny mpifanolo-bodirindrina aminao na ny fianakavianao ny psychulanz dia tokony hiantso mba hiantohana fa afaka atsipy ao amin'ny efitrano fitokana ho an'ny fanaraha-maso ianao. Azonao atao ny mamaky azy io etsy ambany. Taorian'ny famonoana an'i Thijs H. (avy eo izahay Ny vavolombelona 1 ihany miaraka amin'ny solomaso ao amin'ny haino aman-jery, miaraka amin'i Thijs H. izay efa niaina nandritra ny roa herinandro latsa-danja ary iza no nahasambotra azy nandositra tany amin'ny varavarankely), ny olon-drehetra dia mety hanaiky io lalàna io.
Inona izany ity lalàna ity avy eo? Jereo kely:
Ny fandinihana fepetra dia ho azo tanterahina ny hoe hitandrina olona 3 andro - Ary raha manao fanadihadiana tranga sy maka hevitra ny fianakaviana / havana - raha misy tena mafy ahiahy fa manana fikorontanana ara-tsaina lehibe, ary misy fiahiahiana fa amin 'izany mampidi-doza olona na ny tontolo iainany. Ohatra, ny hery misintona ny loza mety ho tapa-kevitra sy, raha ilaina, mbola azon'ny fepetra maika, na amin'ny teny hafa fanampiana azo ampiasaina. Tsy misy fitsaboana intsony amin'ny fepetra fanaraha-maso.
Ankoatra izany, ity lalàna ity dia ahafahana manome alalana ny fitsaboana vonjimaika alohan'ny vanim-potoan'ny krizin'ny ora 18. Izany dia mahakasika ireo tranga izay azo antoka fa azo antoka fa hisy fepetra amin'ny krizy horaisina, saingy raha mbola maka fotoana ihany ny fametrahana ny fepetra. Raha eo am-piandrasana ny fampidirana io fepetra io, dia mety ilaina ny mametra ny olona voakasika amin'ny fahalalany na ny fitsaboana fanafody mba hampitony azy ary hamerina indray ny toe-draharaha.
"Tsara izany, satria tsy mila an'ity karazana vono-olona ity isika amin'ny karazana toy ny Thijs H. ary mbola mahatsiaro foana an'i Anne Faber ny rehetra (ary tsy hanadino ny famonoana an'i Julie van Espen belza)". Aza mino an'i Martin Vrijland manokana. Ilay mpandinika adim-panahy dia manandrana mandresy lahatra anao fa mety hilalao amin'ny PsyOps (asa ara-psikolojika) amin'ny alalan'ny Olana, fihetsika, vahaolana Maxim. Midika izany fa mamidinao ny fiantraikany eo amin'ny fiaraha-monina amin'ny alalan'ny media. Noho izany, ny fampiasana dia azo avy amin'ny arsenal amin'ny fitaovana ara-teknika sy ny olon-dratsy, fa koa (ary angamba indrindra) manana endrika sandoka noforonina (anisan'izany ny porofon'ny video).
Vitsy no hikarakara fa ny lalàna TBS dia novaina taorian'ny raharaha Anne Faber; mandra-pahitantsika fa mety ho nanaiky zavatra mitovy amin'ny zava-nitranga tamin'ireo mpanohitra teo ambanin'ny Firaisana Sovietika; ireo mpanohitra ny fitondrana izay nesorina tao amin'ny gulag. Ankehitriny, mety tsy manohitra ny fitondrana ianao, fa miandry fotsiny mandra-pialanao tsy hiombon-kevitra amin'ny ray aman-dreny sasantsasany na (amin'ny hoavy), toy ny fitsaboana.
Ny ahiahiko dia ity Thijs H. ity no mahatonga ny olona ho any amin'ny Olana, fihetsika, vahaolana Tokony hiomana amin'ny fanekena ny lalàna mbola tsy nampidirin'i Edith Schippers ny maxim. Ny filazana dia hoe i Thijs dia nodidiana tao amin'ny klinikan'i GGZ. Mariho ny teniko fa ao ambadik'izany dia hita fa raha misy ny mpifanolo-bodirindrina na olom-pantany dia mety ho nantsoina hoe psychulans, dia mety ho nosakanana izany rehetra izany. Ho an'izany dia tsy maintsy miandry antokom-pihetseham-baovao vitsivitsy ao amin'ny Nieuwsuur, DWDD, Pauw ary Jinek isika ary ny vahoaka dia nentina tamin'ny fanekena ny 'manam-pahaizana'. Tsy tokony hotadidinao fa mety hisy fiantraikany amin'ny olona indray ity lalàna ity ary ny fiasan'ny fitsaboana dia afaka mitondra olona marobe amin'ny gulag (tsy misy ny fitsabahan'ny mpitsara na mpitsabo). Afaka manao izany tsaratsara kokoa ianao raha tara loatra. ny mpitsabo mpanampy dia efa any am-piofanana. Tsara izany, tsy dia mpanohitra ianao.
Lisitry ny rohy loharano: nos.nl
Ny olona Holandey tsirairay mety mety 'olona misafotofoto' sy mpandeha mpitsabo
Manao ahoana ny lalao fanoherana mifehy?
Tags: Edith, Featured, Fahasalaman'ny Saina Care, H. famonoana, alika kely, toeram-pitsaboana, mpamono olona, vaovao, olana, psychulance, fanehoan-kevitra, Schippers, vahaolana, Thijs, mpitsangantsangana, lena, lalàna, volavolan-dalàna
9 May 2019 amin'ny 21: 23
Eny, marina koa i Peter R de Vries, De Dwangbuis: tadidinao
Manana hevitra hafa ve ianao ??? : "Amin'izay fotoana izay dia azo esorina amin'ny tratra"
DANGER TUBE ARTICLE
Ankehitriny dia fantatry ny rehetra fa ny Wim Dankbaar dia tokony hitazona ny tantaran'i Vaatstra (raha ny marina dia Psyopp), fa niasa niaraka tamin'i Peter izy mba hanao hetsika voalohany.
Satria tokony ho menatra i Wim raha toa ka "tsia" psyopp izany.
Ary avy eo tsy azo lazaina hoe mora azo antsoina hoe mety, na tsy marina ny wimmetje
heray nanoratra hoe:
9 May 2019 amin'ny 22: 14
"Efa mianatra ny mpitsabo mpanampy."
Haha, mahagaga. Ireo ampahany amin'ilay piozila dia tena mifangaro tanteraka.
10 May 2019 amin'ny 06: 55
Tena mazava ve fa tianao ny lisitr'ireo orinasa sy famitahana mba hiatrehana ny fanodikodinana ny lalànan'i Edith Schippers?
Wilfred Bakker nanoratra hoe:
10 May 2019 amin'ny 19: 17
Thijs ... mandeha an-tsitrapo mankany amin'ny paroasy mihidy ary miezaka ny mandositra avy eo?
Danny nanoratra hoe:
10 May 2019 amin'ny 21: 19
Nitranga tampoka izany, raha vao azonao ny fomba fiasany, dia mazava ny fomba nandehanany.
Tsapanao ihany koa fa misy zavatra tsy mety amin'ity karazana vaovao ity, raha toa ka somary mahatsiaro kely ianao.
Toa tsy manandrana manao izany ho azo itokisana koa izy ireo.
Tahaka ny hoe miezaka mamorona sary izy ireo fa misy mpamono maditra na aiza na aiza ... izay mamono ny vahoaka marina ...
11 May 2019 amin'ny 08: 19
Ny gazetiboky ny fifanoherana any Holandy
11 May 2019 amin'ny 11: 48
Ary dia mihodina fotsiny izahay, ka mety ho tratra ny lalàna Edith Schipper
11 May 2019 amin'ny 11: 56
Ary manome soso-tsakafo fanampiny isika, mba hahafahan'ireo vola bebe kokoa hampiasaina amin'ny gulag:
maso iray misokatra nanoratra hoe:
11 May 2019 amin'ny 19: 40
Ataovy fotsiny izany, dia ho sahiran-tsaina ianao.
Mpiserasera, mpitsikera, ireo mpandinika tsy misy mpanelanelana, izay tsy ampoizinao amin'izao fotoana izao.
Ampio ny tontolon'ny firenena iray manontolo amin'ny tondra-drivotry ny mpanolana / mpamono olona, ​​psychopaths ary mpampihorohoro! Tato anatin'ny taona vitsy, dia nisy fiovana be tany Holandy, na mbola tsy nisy ny tena zava-dehibe. Inona no iainantsika any amin'ny firenena mampidi-doza? Isaky ny misy fotoana, misy zavatra mety hitranga. Saingy tsy amin'ny gaypride na ny andron'ny mpanjaka dia misy ny fiaraha-mientana, na ny mpamono olona, ​​ny rapper sns sns dia faly sy velom-pifaliana.
« Fiarandalamboarana fiara manaraka: Patrick Cavalle Courant conservation via Café Weltschmerz
Fotoana hanesorana ity tranonkala ity? UPDATE 15-05-2019 »
Total visits: 13.080.908